people Nepal » जर्मनीका प्रशिक्षक योचिम लोको पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी, अरुको कति ? जर्मनीका प्रशिक्षक योचिम लोको पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी, अरुको कति ? – people Nepal
एजेन्सी, २७ जेठ : विश्वकपमा खेलाडीहरु जति महत्वपूर्ण हुन्छन् त्यति नै प्रशिक्षक पनि हुन्छन् । कुन खेलाडीलाई कसरी प्रयोग गरी खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने योजना प्रशिक्षकको हुन्छ । त्यसैले प्रशिक्षकको पनि खेल बजारमा राम्रै चर्चा हुने गरेको छ ।